Diyaaradda Ethiopian Airlines oo lagu eedeeyay hub sharci -darro ah oo la gaarsiiyay Eritrea
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Diyaaradda Ethiopian Airlines oo lagu eedeeyay hub sharci -darro ah oo la gaarsiiyay Eritrea
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • War Deg Deg Ah Eritrea • Wararka Itoobiya • Wararka Dowladda • News • Dadka • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Ethiopian Airlines oo lagu eedeeyay inay hub sharci darro ah u rartay Eritrea
Haddii ay run tahay, sheegashadu waxay xadgudub ku tahay sharciga duulista caalamiga ah, kaas oo mamnuucaya in loo adeegsado diyaaradaha rayidka ah daabulidda hubka millateri.
Baadhitaanka CNN ayaa ku andacoonaya in Ethiopian Airlines ay adeegsatay diyaaradaheeda si ay hub ugu rarto ugana soo qaado Eritrea.
Haddii ay run tahay, fadeexaddan ayaa halis gelin karta xubinnimada Ethiopian Airlines ee Star Alliance oo faa’iido badan leh.
Ethiopian Airlines waxay ku andacoonaysaa inay "si adag u hoggaansameyso dhammaan xeerarka la xiriira duulimaadyada Qaranka, gobolka iyo kuwa caalamiga ah".
Xamuulka calanka Itoobiya ayaa lagu eedeeyey warbixin cusub oo CNN oo baaritaan ah in hub si sharci darro ah looga soo daabuliyey Itoobiya loona qaaday Eritrea intii uu socday dagaalkii sokeeye ee dhiigga badani ku daatay ee Tigray.
Baaritaanka CNN wuxuu soo xigtay “dukumiintiyada xamuulka iyo muujinta,” iyo “akoonnada goobjoogayaasha iyo caddeyn sawir” oo xaqiijiyey in hub la soo raray Ethiopian Airlines Diyaaradaha u dhexeeya garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Addis Ababa iyo garoomada diyaaradaha Eritrea ee Asmara iyo Massawa bishii Nofembar 2020.
Markii la baaray sharciyadii jidadka, war -baahinta ayaa ogaatay in “ugu yaraan lix jeer - laga bilaabo Nofeembar 9 illaa Nofeembar 28 - Ethiopian Airlines wuxuu ku dallacsiiyay wasaaradda gaashaandhigga Itoobiya tobanaan kun oo doollar oo alaab milateri ah si loogu raro Eritrea. ”
Waraaqaha hawada, kuwaas oo ah dokumenti la socda alaab ay soo dirtay wariyaha hawada caalamiga ah si ay u siiyaan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan shixnadda oo u oggolaanaya in lala socdo, ayaa muujisay in qalabka la diray ay ku jiraan qoryo, rasaas, iyo xataa baabuurta gaashaaman.
Shuruudaha iyo soo gaabinta oo ay ka mid yihiin “Dib -u -buuxinta Militariga,” “AM” ee rasaasta iyo “RIFFLES” (si qaldan qoriga qoryaha) ayaa ka muuqday waddooyinka, sida laga soo xigtay baaritaanka CNN, oo sidoo kale soo xigtay wareysiyo lala yeeshay shaqaalaha diyaaradda oo xaqiijiyay shuruudaha.
hore ee A Ethiopian Airlines shaqaalaha xamuulka ayaa baarayaashii u sheegay:
“Baabuurtu waxay ahaayeen Toyota pickups oo meel u taagan kuwa wax dila. Waxaa i soo wacay agaasimaha maamulka goor dambe oo habeennimo ah oo la igu wargeliyay inaan xambaaro alaabta. Askartu waxay yimaadeen 5tii subaxnimo si ay u bilaabaan inay raraan laba baabuur oo waawayn oo hub ku raran yihiin. Waa inaan joojiyaa duulimaadkii aan ku aadi lahaa Brussels, a Boeing 777 diyaarad xamuul ah, oo ay ku rarnaayeen ubaxyo, ka dibna waxaan soo dejinnay kala bar alaabtii burbursan si aan boos uga helno hubka. ”
Diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa beenisay dhacdadaas, iyada oo sheegtay inay “si adag u hoggaansameyso dhammaan xeerarka la xiriira duulimaadyada ee heer qaran, gobol iyo caalamiba” iyo in “intii aqoonteeda ah iyo diiwaankeeda, aysan ku qaadin wax hub ah mid ka mid ah waddooyinkeeda diyaaradaheeda. ”
Qoraalkan ugu dambeeyay wuxuu calaamad u yahay tallaabo la dareemi karo oo ka soo laabanaysa bayaankii hore ee diyaaradda oo si cad u diidey inay wax hub ah qaadday intii colaaddu socotay.
Haddii ay run tahay, sheegashooyinka baaristu waxay xadgudub ku tahay xeerka duulista caalamiga ah, kaas oo mamnuucaya in loo adeegsado diyaaradaha rayidka ah daabulidda hubka milateri. Waxa kale oo ay halis gelin kartaa xubinnimada Ethiopian Airlines ee Star Alliance, oo ah koox ka kooban 26 shirkadood oo caalami ah.
Same wuxuu leeyahay,
Oktoobar 8, 2021 at 12: 20
Taasi run ma aha annagu hadda waxaas oo dhan waa siyaasadda dawladda Itoobiya waxay haystaan ​​diyaarado milatari oo ay leeyihiin sababta ay u isticmaalaan shirkadaha diyaaradaha ee Itoobiya kani waa siyaasad isku day wax kale.